Deegaanno muhiim ah oo lagala wareegay al-Shabaab
Ururka dilaaga ah ee diinta Islaamka ka been sheegay ee al-Shabaab ayaa dhawaan lagala wareegay deegaanno ka tirsan gobalka Shabeellaha Hoose oo uu hadda ka hor dadweynaha Soomaaliyeed ku dhibaateyn jiray.
Korneyl Maxamed Cabdullaahi Caraalle, Taliyaha ururka 35-aad Guutada 7-aad qeybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanku la wareegeen deegaannada kala ah Leego, Yaaqbirweyne, Madax-maroodi iyo deegaanno kale oo halkaasi ku dhow.
Taliyuhu wuxuu sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka iyo xubnaha al-Shabaab halkaasi dagaal uu ku dhexmaray, ayna dileen 15 ka mid ah dagaal-yahannada al-Shabaab.
Howlgalkaan ay Ciidamadu ku qaadeen deegaanno iyo tuulooyin u dhaxeeya degmada Walaweyn iyo deegaanka Leego ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa maleeshiyada argagixisada al-Shabaab looga saaray deegaanno badan oo ay ku dhibaateyn jireen dadka rayidka ah.
Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa si dardar ah ku wado howlgallo argagixisada looga sifeynaayo deegaanada ay kaga dhuumaaleysanayaan Gobolada dalka, iyagoo dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa argagixisada.